ခရမ်းမြို့ ပစ်ခတ်မှု စစ်ကောင်စီတပ်သား ငါး ဦးသေဆုံးပြီး၊ PDFဘက်မှ သုံးဦးကျဆုံး - Myanmar Pressphoto Agency
ခရမ်းမြို့ ပစ်ခတ်မှု စစ်ကောင်စီတပ်သား ငါး ဦးသေဆုံးပြီး၊ PDFဘက်မှ သုံးဦးကျဆုံး
Khayan military Myanmar News PDF
PDF September 17, 2021 ·0Comment
Update _ ခရမ်းတိုက်ပွဲအတွင်း လက်မောင်းနှင့်ပေါင်တွင် ကျည်မှန်ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရသည့် ခရမ်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တစ်ဦးမှာ ခရမ်းရဲစခန်းတွင် ကျဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ခရမ်းမြို့ အားကစားရုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်) ည ၆နာရီကျော်အချိန်မှစ၍ အပြန် အလှန်ပစ်ခတ်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ ငါး ဦးသေဆုံး၍ PDF ဘက်မှ နှစ်ဦးကျဆုံး ၁ဦး ဒဏ်ရာများဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ခရမ်းမြို့တွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် အပြန် အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ခရမ်းမြို့အား အင်အားအများအပြားဝင်ရောက် ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
” ညနေပိုင်းက ဗုံးကွဲသံကြားပြီးတော့ အပြန် အလှန်တွေပစ်ကြတယ်။ ည ၉နာရီလောက်မှ ပစ် ခတ်သံမကြားရတော့တာ။ နှစ်ဖက်စလုံးထိတယ်။ အဲဗုံးကွဲပြီးတော့ မြို့ထဲတင်မဟုတ်ဘူး။
ဒီ ပဲခူးရိုးဘက် သက္ကလဘက်ထွက်တဲ့ဘက်မှာ လည်း ပစ်တဲ့အသံကြားရတယ်။ အဲ့ဘက်ကိုလည်း ခုပိတ်ဆို့ထားတယ်။” ဟု ခရမ်းမြို့ခံတစ်ဦးက MPAသို့ပြောသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုများတွင် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ငါးဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး PDF လူငယ်ဘက်မှလည်း ကျဆုံးမှုရှိပြီး ဖမ်းဆီးခံရမှုရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ခရမ်းမြို့အဝင်အထွက်အား လုံးဝ ပတ်ဆို့ထားပြီး သန်လျင်ရေတပ်အပါ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပိတ်ဆို့ထားပြီး စစ် ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
ခရမ်းမြို့အတွင်း လျှပ်စစ်မီးများလည်း ဖြတ်တောက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ညမထွက်ရအချိန်နောက်ပိုင်းထိ လုံခြုံရေးအင်အား အများ အပြားဖြင့် ထပ်မံစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
#ခရမ်း #PDF #စစ်ကောင်စီ #အပြန်အလှန်ပစ်ခတ် #MPA
Five SAC Soldiers and Three PDF Killed in Khayan Town Shooting
Update: One Khayan local defense force member who was arrested after getting injured on the arm and thigh has died at the Khayan Police Station.
After an explosion at the Khayan Sports Center in Yangon region, there was an exchange of shots between the SAC and local depense forces on September 17 evening at about past 6pm and five SAC soldiers and two PDF were killed and one PDF was arrested with injuries.
Following the explosion in Khayan, there was an exchange of shots and Khayan has now been blocked with heavy forces.
“In the evening, there were exchanges after an explosion. The shots ceased at about 9pm. Both sides got hurt. After the explosion, shots were also heard around an exit to Thekkala, Bago. That side also has now been blocked,” saidaKhayan resident to MPA.
In the exchange process, five SAC soldiers were killed and there were also casualties on PDF side and also an arrest.
Currently, all the ins and outs of Khayan town has been blocked and checks are being done by the SAC Forces including the Thanlyin Navy Force.
In Khayan, electricity power was cut off and security forces are carrying out checks even past the current night curfew time.
#Khayan #PDF #SAC #ExchangeofShots #MPA